EYONA NDAWO YOVAVANYO LWEDNA YOBUGQIRHA NGAMA-50% ISAPHULELO SEAMAZON PRIME DAY - IZITHEMBISO EZILUNGILEYO
Inani Ukusebenza Ubomi I-Covid-19 Ukuhla Ukusinda Impilo Umhlaza Wolusu Ubuhle Obujongiwe Ngokutsha Ukhathalelo Lolusu Umsebenzi Wokusebenza Ukutya Kunye Nesondlo Unyango Lwendalo
Eyona Ndawo yoVavanyo lweDNA yoBugqirha ngama-50% isaphulelo seAmazon Prime Day
Eyona / Izithembiso Ezilungileyo
Imifanekiso ka-Getty / iAmazon
Inqaku loMhleli (nge-17 kaJulayi): Ngaba ujonge isivumelwano kwi-23andMe? Njengale ntsasa, I-23andMe i-Ancestry + yezeMpilo ngoku ikhutshiwe ngama-50% kwi-Amazon Prime Day . Unga yithenge apha ye $ 99.99.
Abantu banomdla kakhulu kwizixhobo zovavanyo lwe-DNA yookhokho- kwaye kulula ukubona ukuba kutheni. Into ekufuneka uyenzile kukutshica ikhithi yokuqokelela amathe, pop ikiti, kwaye ulinde. Emva koko, kwiiveki ezintandathu ukuya kwezisibhozo kamva ubunobutyebi bolwazi olunomdla malunga nelifa lakho elilethwe ngqo kwikhompyuter yakho okanye kwi-app ye-smartphone.
Ukucacisa i-DNA yakho akubizi, kodwa ungagcina ama-50 epesenti kwifayile ye- Ikhithi yoVavanyo lweDNA yeNational Geographic: Geno 2.0 Generation Next xa ukhetha enye kwiAmazon ngexesha labo elikhulu Intengiso ye-Prime Day .
I-National Geographic DNA Kit Kit: I-Geno 2.0 Isizukulwana Esilandelayo (i-Ancestry) -Ixhaswe nguHelixHelix amazon.com THENGA NGOKU
I-Prevention.com ivavanye uninzi lweekiti zovavanyo lwe-DNA kwintengiso, kubandakanya i-23andMe, i-Ancestry DNA, kunye nale (funda ngokupheleleyo Ukuphononongwa kwekiti yovavanyo lwe-DNA ). Siyakholelwa ukuba le khithi yovavanyo yeyona ilungileyo onokuyithenga ukuba unomdla wokuntywila kwimbali yookhokho bakho. Ngelixa uninzi lweenkonzo zigxile ekutyhilweni kookhokho bakho abasondeleyo kunye neenkcukacha malunga nelifa lakho lakutshanje, uNatGeo ubuyela umva okuninzi Ngokubhekele phaya-iingxelo zayo zibonisa ukwakheka kookhokho bakho kufikelela kwiminyaka eyi-100,000, kwaye kutsha nje njengamakhulu ambalwa eminyaka eyadlulayo.
Kunqabile ukuba ukwazi ukuthenga ikiti yovavanyo lwe-DNA phantsi kwe- $ 50, kodwa namhlanje, le khithi (ngesiqhelo i- $ 99.95) yi- $ 49.95 kuphela. Ukubamba kuphela: Ufuna ubulungu ukuze usebenzise eli thuba, ke ukuba awunayo, bhalisa apha . (Ukuba awufuni ukuba lilungu leNkulumbuso kuhambo olude uhlala ubhalisela i Uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30 Esi sivumelwano siphela ngentsimbi yesithathu nge-EST ngoJulayi 18, okanye kude kuphele ukubonelelwa.
UTaraji P. Henson Stuns kwi-Baw-Dropping String Bikini ukubhiyozela i-50th Birthday yakhe
Izinto Ezingalindelekanga Uvavanyo lweGazi lunokutyhila Ngawe
Iimpawu zomhlaza wemiphunga ye-9 Nokuba bangatshayi kufuneka bazi, ngokukaGqirha
Iimpawu Zempilo Ezingaqhelekanga
Izinto ezi-7 eziKhulu ezenzekayo xa uyeka ukusebenzisa iiTampon
Iinkozo ezili-10 eziSimahla zeGluten ongazange wazama
Iingcebiso Ngokutya Okusempilweni
Iindawo Zokutya, I-Esoteic, Inombolo Yakho, Iikristali Kunye Nangaphezulu.
into yokusela ukunciphisa umzimba
Izihlangu ezona ziqhelekileyo ze-fasciitis yesityalo
ulenza njani igumbi lakho lihlale kamnandi
ukhuni lwenkuni vs inyamazane inyikima nenja
intsingiselo yokomoya yama-333
lithetha ntoni inani u-1111
Copyright 2022| jf-vilaboadobispo.pt | Umthetho Wabucala